बाइबलका कथाहरू: पूरै परिवार मिश्र सर्छ - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
यूसुफले अबचाहिं आफ्नो मन थाम्न सक्दैन। उसले आफ्ना सबै नोकरहरूलाई कोठाबाहिर पठाउँछ। आफ्ना दाजुभाइसित एक्लै भएपछि ऊ रुन थाल्छ। यो देखेर यूसुफका दाजुभाइहरू छक्क पर्छन्। किनभने ऊ किन रोइरहेछ भनेर उनीहरूलाई थाह छैन। अन्तमा यूसुफले यसो भन्छ: ‘म यूसुफ हुँ। के मेरा बुबा अझ पनि जिउँदै हुनुहुन्छ?’
यो सुनेर यूसुफका दाजुभाइहरू असाध्यै छक्क पर्छन् र केही बोल्नै सक्दैनन्। उनीहरू यूसुफसित डराउँछन्। तर यूसुफ यसो भन्छ ‘कृपया मेरो नजिक आओ।’ उनीहरू नजिक आएपछि यूसुफले यो पनि भन्छ: ‘म तिमीहरूको भाइ यूसुफ हुँ जसलाई तिमीहरूले मिश्रमा बेचेका थियौ।’
यूसुफ दयालु हुँदै यसो भन्छ: ‘तर मलाई यहाँ बेचेकोमा तिमीहरू अब आफूलाई दोष नदेओ। मान्छेहरूलाई बचाउन मलाई परमेश्वरले नै मिश्रमा पठाउनुभएको हो। फिरऊनले मलाई सारा देशको मालिक बनाएका छन्। यसकारण अब तुरुन्तै मेरा बुबाकहाँ गएर यी सबै कुरा बताओ र कत्ति पनि अबेर नगरी मकहाँ लिएर आओ।’
तब यूसुफले आफ्ना दाजुभाइलाई अंगालो हालेर म्वाइँ खान्छ। यूसुफका दाजुभाइ आएको सुनेपछि फिरऊनले यूसुफलाई यसो भन्छ: ‘तिम्रा दाजुभाइहरूलाई गाडाहरू लैजान र आफ्नो बुबा अनि सबै परिवारहरू लिएर यहाँ फर्कन भन्नू। म उनीहरूलाई मिश्रको सबैभन्दा असल ठाउँ दिनेछु।’
यूसुफका दाइहरूले त्यसै गरे। चित्रमा हेर त, यूसुफका बुबा याकूब आफ्नो पूरै परिवार लिएर यूसुफलाई मिश्र देशमा भेट्दैछ।
याकूबको परिवार ठूलो भइसकेको थियो। उनीहरू मिश्र आइपुग्दा याकूब, उसका छोराछोरी र नाति-नातिना गरेर जम्मा ७० जना थिए। तर यसबाहेक याकूबका बुहारीहरू अनि थुप्रै नोकर-चाकरहरू पनि थिए। त्यसपछि उनीहरू सबै मिश्रमा बस्न थाले। उनीहरूलाई इस्राएली भनिन्थ्यो। किनभने परमेश्वरले याकूबको नाउँ फेरेर इस्राएल राख्नुभएको थियो। इस्राएलीहरू परमेश्वरका विशेष मान्छे बन्छन्। यसबारे हामी पछि पढ्नेछौं।
आफू को हो भनेर यूसुफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई बताएपछि के हुन्छ?
यूसुफ दयालु हुँदै आफ्ना दाइहरूलाई के भन्छ?
यूसुफका दाजुभाइहरू आएको सुनेपछि फिरऊनले के भन्छ?
मिश्रमा सर्दा याकूबको परिवार कति ठूलो थियो?
याकूबको परिवारलाई के भनिन्थ्यो र किन?
उत्पत्ति ४५:१-२८ पढ्नुहोस्।
आफ्ना सेवकहरूलाई हानि पुऱ्याउन रचिएको कुरालाई यहोवाले असल नतिजामा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ भनी यूसुफको विवरणले कसरी देखाउँछ? (उत्प. ४५:५-८; यशै. ८:१०; फिलि. १:१२-१४)
उत्पत्ति ४६:१-२७ पढ्नुहोस्।
याकूब मिश्रतर्फ जाँदै गर्दा बाटोमा यहोवाले उसलाई कस्तो आश्वासन दिनुभयो? (उत्प. ४६:१-४)